Asiaprint mitazona ilay hevitra miaraka amin'ny "Sevice important more"
Androany no nanondrananay ireo milina fanodinana hafanana roa tany Vietnam. Ny baiko milina famindrana hafanana dia feno amin'ity roa volana ity ary manemotra ny sasany amin'ireo kaomandy ary miteraka tsy fahafaham-po ho an'ny mpanjifa. Ho an'ny kaomandinao manaraka, azafady mba hanafarana tsy ho ela mba hanararaotra ny fotoana ...Hamaky bebe kokoa »
Ahoana ny fomba fampiasana ilay milina fanodinana hafanana?
Dingana fiasa 1. Hamarino tsara fa mampifandray herinaratra dingana telo ianao. Tsindrio ny bokotra "Blanket Enter", ny lamba firakotra hanakaiky kokoa ny amponga ary handrehitra ny fanairana "Blanket Action Indication" sy ny fanairana amin'ny fotoana iray aorian'ilay lamba firakotra ...Hamaky bebe kokoa »
Ny ASGA Show At Vietnam dia fahombiazana lehibe ihany koa tamin'ity taona ity. Ny milina fanodinam-pandehanay dia nankafy ny lazany indrindra toa ny nantenainay. Raha ny fanjifan'izy ireo dia apetrakay miaraka amin'ny vidiny mirary ny masinina ara-toekarena hamaliana ny fangatahan'izy ireo. Ary hevero, tamin'ny andro voalohany tamin'ny fampisehoana, nahavita ny ...Hamaky bebe kokoa »
Fampisehoana ny menaka mafana: Fahombiazan'ny hafanana avo, fahamendrehana tsara, hafanana avo lenta ary coefficient amin'ny fitondra hafanana. Na izany aza, ny menaka hafanana dia hitranga Fahazoana rojo eo anelanelan'ny atôma sy ny molekiola, ho simba ny fitambarana mba hitazonana ny hafanana ambony ...Hamaky bebe kokoa »
Ny seho SGIA 2016 tany Las Vegas dia goavana sy marevaka toy ny tanàna nampiantrano azy. Izahay tao amin'ny ASIAPRINT dia faly indrindra tamin'ity seho ity satria nanana antony mihoatra ny iray ny fahatsapàna izany. Tsy hoe satria manana sidina mahafinaritra mandritra ny 16 ora isika fa mahita olona mahalala fomba sy tsara fanahy any Las Vegas ihany koa. Izahay dia ...Hamaky bebe kokoa »